Ny fiaraha-miasa ao Jamaika Saodiana dia mahatonga ny fizahan-tany hatanjaka kokoa
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany an'ny governemanta sy ny sekolim-panjakana » Ny fiaraha-miasa ao Jamaika Saodiana dia mahatonga ny fizahan-tany hatanjaka kokoa
Ny toerana hanaovana ny fihaonana anelanelan'ny minisitry ny fizahan-tany any Jamaika sy i Arabia Saodita dia natao tany Cancun, Mexico, nandritra ny fihaonambe manerantany sy ny fizahan-tany (WTTC) eran-tany izay nanomboka ny 25-27 aprily 2021.
Nivory ireo minisitry ny fizahantany roa avy any Jamaika sy Arabia Saodita mba hiresaka momba ny faharetan'ny fizahan-tany.
Ny Center Global Resilience & Crisis Management Center (GTRCMC) dia manana mpiara-miasa sy mpanohana mitovy endrika amin'i Saudia Arabia ankehitriny.
Ny minisitra Bartlett dia nasain'ny minisitra Al-Khateeb hanatevin-daharana ny filankevitry ny Akademia fizahantany manerantany izay hanohana ny fiofanana sy ny fampandrosoana ho an'ny Ivotoerana.
Nandritra ny fivoriana, ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, sy ny Andriamatoa Ahmed Al-Khateeb, minisitry ny fizahan-tany ao amin'ny fanjakan'ny Arabia Saodita, dia niara-nankafy kafe Meksikana satria ny fifanakalozan-kevitr'izy ireo dia nahatonga azy ireo hametraka ny fahaizan'ny fizahan-tany amin'ny toerana mafy kokoa.
Efa natosika tany amin'ny WTTC sy ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany eran-tany (UNWTO), ny Global Tourism Resilience & Crisis Management Center (GTRCMC) dia manana mpiara-miasa sy mpanohana mitovy amin'izany - ny Governemanta Saudi Arabia.
Nisy ny dinika sy ny fifanarahana momba ny fiaraha-miasa amin'ny fananganana a Ivotoerana fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy fizahana krizy any Riyadh, Saudia Arabia. Ny minisitra Bartlett dia nasain'ny minisitra Al-Khateeb hanatevin-daharana ny filankevitry ny Akademia fizahantany manerantany izay hanohana ny fiofanana sy ny fampandrosoana ho an'ny Ivotoerana.